အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၈ ဧပြီ
Posted by kai on Apr 23, 2018 in Editor's Choice, Myanmar Gazette | 12 comments
အေရာင္ရင့္မွတ္တမ္း - ၂၀၁၈ ဧျပီ
– မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတသစ် ဦးဝင်းမြင့်၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကျမ်းကျိန်သတင်း။
– Burmese American Medical Association ၏နှစ်ပတ်လည်ညစာစားပွဲသတင်း။
– ဧပြီအလှပန်း မေလင်းဖြူ။
– မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့)၏ အရိုးပွ၊ အရိုးကျိုးရောဂါ။
– ဒေါက်တာအောင်ဇော်ထိုက်၏ တိရစ္ဆာန်မှကူးစက်သောရောဂါများ။
– ဆရာထွန်း(တဆ-၂၂၂၁)- ဆေးဖက်ဝင်ကမ်းဇော်ဆီ။
– ဆရာမျိုးမြင့်ကေ ျာ်ရဲ့ အင်္ဂင်္လိပ်စာသင်္ခန်းစာဆောင်းပါး။
– မောင်မိုးညိုရဲ့ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သော် အသိပညာပေးဆောင်းပါး။
– တိမ်မည်းရဲ့ အဝေးရောက်အလုပ်ခွင် ဆောင်းပါး။
လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ ဓာတ်ပုံအက်ဆေး၊ ဗေဒင်၊ ဟင်းချက်နည်း သုတ၊ ရသစုံလင်စွာဖြင့် သင်္ကြန်အကြို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် မြန်မာ့ဂဇက်ထွက်နေပါပြီ။
နီးစပ်ရာမြန်မာစတိုးဆိုင်များ၊ မြန်မာဆေးခန်းများမှာ အခမဲ့ရယူပါ..။
အိနိ္ဒယမှာ ကလေးမုဒိန်းမှု.. သေဒဏ်…တဲ့..။
Updated 2:32 PM ET, Sat April 21, 2018
(CNN)India’s Cabinet has passed an executive order to make the rape ofagirl under 12 punishable by the death penalty as national outrage grows over sexual violence in the country.
The order — known as an ordinance — was approved Saturday ataCabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, according to India’s Ministry of Women and Child Development.
Toy aircraft sparks alarm as it hovered close to Riyadh royal palaces
Updated: April 23, 2018 11:38 AM
Saudi state media dismissed rumours of political unrest in Riyadh on Sunday after unconfirmed reports of clashes and gunfire near the royal palace circulated on social media.
Security forces on Saturday night shot downasmall drone flying over the capital’s Khozama district, Riyadh police said.
A police spokesman quoted by the official Saudi News Agency (SPA), saidasecurity screening point noticedasmall, unauthorised recreational drone on Saturday evening and security forces dealt with it.
By Leyla Santiago, Khushbu Shah and Catherine E. Shoichet, CNN
Updated 9:48 PM ET, Tue April 24, 2018
Tijuana, Mexico (CNN)Busloads of Central American migrants arrived in this Mexican border city on Tuesday. And more are coming.
But it will likely be days before members of the group — which organizers say is about 600 people in total — head to the US-Mexico border to turn themselves in and ask for asylum.
နောင်အနှစ် ၂သောင်းအထိ လူနေ၍မရ…တဲ့..။ လုပ်ချင်ဦးဟဲ့.. နူကလီယား..။
RTD Documentary ChannelLike Page
Thirty-two years ago,anuclear reactor exploded at the Chernobyl Power Plant, releasingamassive amount of radioactive debris into the atmosphere. The areas surrounding the explosion won’t be livable for at least 20,000 years.
တိုင်းပြည်ရဲ့ အဆင်တန်ဆာ..ပြည့်တန်ဆာ.. အမွေအနှစ်အသစ်များ.. ခေါ်ကုန်ပြီ…။
Published time: 25 Apr, 2018 16:01
© Mario GutiérrezCouple attack passengers for interrupting oral sex on Berlin train
ကကြီးတို့ တိုင်းပြည်ဇတ်လမ်းနောက်ကွယ်က.. လက်ဖြူလက်မဲကြီးများ..။
တောင်ကကြီးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အမေရိကား-အိမ်ဖြူတော်ကို တလောကလာခဲ့တာရယ် ..
လာမယ့်.. မေအကုန်..ဇွန်လောက်မှာ ထရမ့်နဲ့ ကင်မ်တို့ တွေ့မှာရယ်..။
ဒီအဖြစ် ၄ ခုကိုတွက်ကြည့်ရင်.. ဒီကစားပွဲဟာ.. ချိုင်းနား-အမေရိကား ကစားပွဲစစ်စစ်လို့ပဲမြင်မိတယ်..။
သမ္မတဖြစ်ကာစ.. အူကြောင်ကြောင်နဲ့.. TPP ကောက်ထွက်ထားတဲ့ ထရမ့်ဟာ.. အရှေ့အာရှရဲ့.. ဓနနဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ သူတို့အားပြိုင်မှုကို သေသေချာချာ စာမကြေနေဘူးလို့ထင်ရပုံရှိပါတယ်..။
ဒါပေမယ့်.. သူက..မွေးရာပါ အရင်းရှင်စီးပွားရေးသမားကြီးမို့.. အမေရိကန်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရာမှာတော့.. ဆြာကြီးဖြစ်လောက်ပါတယ်..။
Full remarks: South Korean envoy announces Trump to meet with Kim …
Mar 8, 2018 – South Korean National Security Director Chung Eui-yong (R) walks out to makeastatement beside National Intelligence Service chief Suh Hoon (L), at the entrance to the West Wing of the White House on Thursday. Photo by Michael Reynolds/EPA-EFE. March 8 (UPI) — South Korean President Moon …
North Korean leader Kim Jong-un travelled to China on an armoured …
Mar 27, 2018 – Former North Korean leader Kim Jong-il hated flying and used this armoured train to travel abroad, hosting mobile parties with heavy drinking, karaoke and live lobsters. His son has now used it for his first trip outside North Korea since his father died in 2011.
CIA’s Mike Pompeo had secret meet with Kim Jong Un in North Korea …
Apr 18, 2018 – CIA boss Mike Pompeo met with North Korean leader Kim Jong Un duringasecret visit in early April amid negotiations foraface-to-face meeting with Trump, according toareport. Pompeo traveled to the isolated nation during the Easter weekend, the Washington Post reported, citing sources with ..
n Pictures: Pulitzer Prize for Reuters’ coverage of Rohingya exodus
International news agency Reuters won the Pulitzer Prize on Feature Photography for their photo coverage of the mass exodus of Rohingyas fleeing Myanmar to Bangladesh.
စားကုန်ပြီ.. စားကုန်ပြီ..။ ပလပ်စတစ်တွေစားကုန်ပြီ…တဲ့.
Hungry, hungry enzymes.
By Neel V. Patel April 17, 2018
Inanew study to be published in the Proceedings of of the National Academy of Sciences this week,ateam of international scientists illustrate how they created—by accident—a new enzyme capable of breaking down plastic bottles. This providential development could finally allow us to fully recycle plastic drink bottles for the first time ever, puttingamuch-needed dent in plastic pollution increases.
ရိုဟင်ဂျာ-မြန်မာအပေါ်.. ဇက်ကာဘတ်ရဲ့ အမြင်.. ၁။၂။၃
မာ့ခ်ဇတ်ကာဘတ်ဂ် တုံ့ပြန် တာကတော့ …..
“ကျနော်တို့ ကြိုးစား နေပါတယ်။ အတိအကျ ပြောရရင် ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင် နေတာ ၃ မျိုး ရှိတယ်။ ပထမ တစ်ချက်ကတော့ မြန်မာ စကားပြောဆို နားလည်တဲ့ စောင့်ကြည်သူတွေ ကို ဒါဇင်နဲ့ ချီပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီက ထပ်မံ ငှားရမ်း အလုပ်ခန့် နေပါတယ်။
ဒုတိယ တစ်ချက်ကတော့ အမုန်း တရား ဖြန့်ချီသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလည်း ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ တင်လာတဲ့ ပို့စ်တချို့ကို ဖြုတ်ချဖို့ မဟုတ်ပဲ အကောင့် တစ်ခုလုံး ပိတ်ပစ် နိုင်အောင်လို့ပါ။
တတိယ တစ်ချက် ကတော့ …. မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနာဂတ်မှာလည်း ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေကို တင်ကြို ဟန့်တားနိုင်တဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်” ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပိုင်ရှင် မစ္စတာ ဇတ်ကာဘတ်ဂ်က ပြောသွားပါတယ်။
Apr 10 1:44p
A Beijing sperm bank has demanded loyalty to the Communist Party from all potential donors.
Peking University Third Hospital said inastatement on its WeChat web page on Wednesday that donors must “love the socialist motherland”.
The post also promised 5,500 yuan (£622; $872) to those successful individuals who manage to pass medical tests for fitness and sperm quality.
The statement was later deleted from social media on Friday evening.
Updated 2:17 PM ET, Sun March 25, 2018
(CNN)Facebook founder Mark Zuckerberg took out full-page ads in several British and American newspapers Sunday to apologize fora“breach of trust” in the Cambridge Analytica scandal.
“This wasabreach of trust, and I’m sorry we didn’t do more at the time. We’re now taking steps to ensure this doesn’t happen again,” read the ads appearing in the UK’s The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express and Sunday Telegraph, along with American newspapers The New York Times, Washington Post and Wall Street Journal.
သူက ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဖက်ကပ်တည်လှုပ်ရှားတယ်..။ ထိုင်းတရားရုံးက..ဒီလိုပြန်လုပ်တယ်..။
BANGKOK – The Bangkok South Criminal Court has issued an arrest warrant for rights activist Andy Hall on Tuesday, after he failed to show up foracourt session.
Hall was sentenced then to four years’ imprisonment (reduced by one year and suspended for two years) and ordered to payafine of Bt200,000 (reduced to Bt150,000) after being convicted on criminal defamation and Computer Crimes Act charges. The conviction is related toacomplaint filed byaThai pineapple company, Natural Fruit Company, in 2013